Dapit - Cebuano - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for: dapit (Cebuano - Burmesiska)
ug mipahawa ang dios gikan kaniya sa dapit diin siya nakigsulti kaniya.
ထိုသို့ ယာကုပ်နှင့်နှုတ်ဆက်၍ မိန့်မြွက်တော်မူ ရာအရပ်မှ၊ ဘုရားသခင် တက်ကြွတော်မူ၏။
ug ilang gipanagtigum sila sa dapit nga sa pinulongang hebreohanon ginganlag armagedon.
အသံတော်ကား၊ သူခိုးကဲ့သို့ ငါလာ၏။ အဝတ် အချည်းစည်းနှင့် သွားလာ၍ သူတပါးရှေ့၌ ရှက်စရာ အကြောင်း မရှိစေခြင်းငှါ နိုးလျက်နေ၍၊ ကိုယ်အဝတ်ကို စောင့်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။
ရှောလုသည် ပရောဖက်ပြုပြီးမှ မြင့်သောအရပ်သို့ သွား၏။
apan gilupig sila ug wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit.
ထိုအခါ ဤလောကတနိုင်ငံလုံးကို လှည့်ဖြား၍ မာရ်နတ်စာတန် အမည်ရှိသော ရှေးမြွေဟောင်းတည်း ဟူသော နဂါးကြီးကို၎င်း၊
ang dios nasayud sa dalan niini, ug siya nahibalo sa dapit niana.
ဘုရားသခင်သာလျှင် ပညာလမ်းကို နားလည်တော်မူ၏။
diin man diay magagikan ang kaalam? ug hain man ang dapit sa salabutan?
oo, niini nangurog ang akong kasingkasing, ug nabalhin sa iyang dapit.
ဤအမှုကြောင့် ငါ့နှလုံးသည် တုန်လှုပ်၍ မိမိ နေရာမှ ရွေ့သွား၏။
နံနက်စောစော အာဗြဟံသည် ထ၍၊ ထာဝရ ဘုရားရှေ့တော်၌ ရပ်နေသော အရပ်သို့ သွားပြီးလျှင်၊
apan nanglakaw sila ug ang iyang kabantug gisangyaw nila sa tanang dapit niadtong yutaa.
သို့သော်လည်း ထိုသူတို့သည် သွား၍ သိတင်းတော်ကို တပြည်လုံး၌ နှံ့ပြားကျော်စောစေ၏။
အနောက်မျက်နှာ လမ်းဝမှာလေးယောက်၊ တန်တိုင်းတော်ပြင်မှာ နှစ်ယောက်စောင့်ရကြ၏။
gipapuyo niya ako sa mangiub nga mga dapit, sama niadtong dugay na nga nangamatay.
သေလွန်သောသူတို့ကို ပြုတတ်သကဲ့သို့၊ ငါ့ကို မိုက်သောအရပ်၌ ထားတော်မူ၏။
ug sakay sa sakayan nangadto sila sa usa ka dapit nga awaaw nga silasila ra.
ထိုကြောင့်၊ လှေစီး၍ တော၌ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သို့ သွားကြ၏။
ug namatay si adad, ug sa iyang dapit, naghari si samla, nga masrecahanon.
ဟာဒဒ်မင်းသေ၍၊ သူ၏အရာ၌ မာသရက် အရပ်သား စာမလသည် မင်းပြုလေ၏။
ang mga bato niini maoy dapit sa mga zafiro, ug kana may mga pulvos sa bulawan.
သူ၏ကျောက်တို့သည် ကျောက်နီနေရာဖြစ်၏။ မြေမှုန့်လည်း ရွှေဖြစ်၏။
oh israel, ang imong mga manalagna nahimong ingon sa mga milo sa kamingawan nga dapit.
အိုဣသရေလအမျိုး၊ သင်၏ပရောဖက်တို့သည် တော၌နေသော မြေခွေးနှင့် တူကြ၏။
ug namatay si jobab, ug naghari sa iyang dapit si husam, sa yuta ni teman.
ယောဗပ်မင်းသေ၍၊ သူ၏အရာ၌ တေမနိ အရပ်သား ဟုရှံသည် မင်းပြုလေ၏။
ang mga dumuloong mangahanaw. ug mangabut nga magakurog gikan sa ilang mga masigpit nga dapit.
ညှိုးနွမ်းသည်ဖြစ်၍ ခိုလှုံရာအရပ်ထဲက တုန်လှုပ်လျက် ထွက်ကြပါ၏။
သို့သော်လည်း၊ သင်သည်မရဏနိုင်ငံ၊ သင်္ချိုင်း တွင်းထဲသို့ နှိမ့်ချခြင်းကို ခံရလေပြီ။
ang akong tiil nagatindog sa dapit nga patag: sa mga katilingban magadayeg ako kang jehova.
အကျွန်ုပ်သည် ညီညွတ်သောအရပ်၌ နေရာ ကျ၍၊ ပရိသတ်အလယ်မှာ ထာဝရဘုရားကို ကောင်းကြီး ပေးပါမည်။
overdue meaning (Engelska>Tagalog)amore della mia vita (Italienska>Engelska)pen holder (Engelska>Malajiska)मै जाने वाला हूँ (Hindi>Engelska)çóç (Grekiska>Danska)tumi ami kacha kachi lyrics (Bengaliska>Engelska)braviest of them all (Engelska>Tagalog)io ho richiesto le fatture alla tecfrigo (Italienska>Engelska)kini dugay (Cebuano>Tagalog)forever family (Engelska>Latin)menghadiri (Malajiska>Kinesiska (förenklad))in dubio contra reum (Latin>Engelska)semper speravit iuducium (Latin>Engelska)španjolska (Kroatiska>Spanska)सेक्सी वीडियो फुल (Hindi>Engelska)nostra translation (Latin>Engelska)pempoull (Bretonska>Franska)ponts (Katalanska>Spanska)källor (Svenska>Hindi)toku teina (Maori>Engelska)digalakkan untuk mereka yang menghafal al quran, (Malajiska>Engelska)marlyna mat (Malajiska>Arabiska)does the lot number (Engelska>Tagalog)rumah bandar (Malajiska>Engelska)tom maddy (Engelska>Tamil)